YEYINTNGE(CANADA): Thursday, August 16
စီမံကိန်း ကော်မရှင် တတိယနေ့ အစည်းအဝေး Photo By :http://www.ministryofinformation.gov.mm/index.php
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/16/20120အကြံပြုခြင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မကြာသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေအတွင်း ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ဟော်လန် အခြေစိုက် နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များအဖွဲ့(AZG)အဖွဲ့အစည်းက ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံအရာရှိဦးကျော်လှအောင်နဲ့ ဝန်ထမ်းအချို့ကို အာဏာပိုင်တွေက ဒီကနေ့ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီဖမ်းဆီးထားသူတွေထဲက ၂ ဦးကို စစ်တွေအကျဉ်းထောင်က ဒီကနေ့ နေ့လည်ပိုင်းမှာ ပြန်လွှတ် ပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီး ၃ ဦးကိုတော့ ဘူးသီးတောင် တရားရုံးကနေ ဒီကနေ့ ညနေ ၅ နာရီလောက်မှာ လွှတ်ပေး လိုက်တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအိုအဖွဲ့အစည်းတွေက ဝန်ထမ်းအချို့ကို မကြာသေးခင်က ဒေသခံ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ အကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခအကြောင်းရင်းတွေနဲ့ တစ်နည်းတစ်ဖုံ ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေတယ်လို့ ယူဆကာ အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် AZG ဝန်ထမ်းတွေကိုတော့ ဒီကနေ့ အပြီးအပြတ်လွှတ်ပေး လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ နီးစပ်သူတွေက ပြောပါတယ်။
ဘူးသီးတောင်ထောင်မှာ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခံထားရဆဲ (၃) ဦးဟာ များမကြာမီက လာရောက်ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တားနားနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
( သြဂုတ်လ ၁၅ ရက် ) ညနေပိုင်းက ဘုန်းဘုန်းတပါးမွန်ဘိုင်း ( ဘုံဘေ ) လေဆိပ်ကပြန်အလာ Taxi ကားငှါးစီးလာရင်း ကားသမားမွတ်စလင်က မွတ်စလင်ရပ်ကွက်အတွင်း ကားကိုရပ်ပေးပြီး မွတ်စလင် ၅ ယောက်ခန့် စစ်ဆေးခံခဲ့ရသည်၊
ကားပေါ်လိုက်ပါလာသော ဘုန်းဘုန်းက ဒလိုင်းလားမား ဘုန်းတော်ကြီးအမျိုးအနွယ်တွေပါ ဟု ဖြေဆိုခဲ့သောကြောင့်သာ အသက်ချမ်းသာရာ ရခဲ့ သည်။
မြန်မာပြည်က Buddhist ဟုဆိုလျှင် ......
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း အပြင်ထွက်စရာ ကိစ္စကြီးငယ် ရှိပါက အစစအရာရာ သတိထားတော်မူကြပါရန် နှိုးဆော်လိုက်ပါသည်ဘုရား..
အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှားရှိ သံဃာတော်များအားလုံး အထူးသတိ ရှိစေလိုပါသည်ဘုရား..
မောင်အောင် ( မွန်ဘိုင်း )
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/16/2012 1 အကြံပြုခြင်း
သတင်းသစ်ဂျာနယ်၊ အမှတ်၁/၀၂၁၊၁၇.၈ ၂၀၁၂
သြဂုတ် ၃ ရက်တွင် UNHCR ရုံးရှေ့၌ သမ္မတကို ထောက်ခံ ဆန္ဒပြ ပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လူငယ်လေးဦးအား သြဂုတ် ၁၄ ရက်နေ့က စမ်းချောင်း ရဲစခန်းမှ လူ့အခွင့် အရေး ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ(၁၈)ဖြင့် တရားစွဲ ဆိုကြောင်း သိရသည်။
တရားစွဲဆိုခြင်းခံ ခဲ့ရသူ ကိုသူရထွန်း၏ အစ်မ ဖြစ်သူက ၄င်း၏ မောင် အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးသမား တစ်ဦး မဟုတ်ဘဲ လွတ်လပ်စွာဖြင့် ဆန္ဒ သွားရောက် ထုတ်ဖော်ခြင်း သာဖြစ်ကြောင်း ၊ ယခုကဲ့သို့ တရားစွဲဆို ခံရခြင်းအပေါ် တွင်ဝမ်းနည်းမိကြောင်းပြောသည်။
”ရဲစခန်းက အစ်မတို့ ဆီကို ဖုန်းဆက် လာတယ်။ စခန်းကို ခဏလောက် လာခဲ့ပါဦးပေါ့။ ဆန္ဒပြဖို့ တင်ပြထားတာ သူတို့လေးယောက် နာမည်နဲ့ ဆိုတော့ သူတို့ လေးယောက်ကိုပဲ ခေါ်လိုက်တာပါ” ဟု ၄င်းကဆက်လက်ပြောသည်။
အဆိုပါ လူငယ် လေးဦးမှာ မည်သည့် အသင်း အဖွဲ့တွင်မှ မပါ ဝင်ကြောင်း၊ ၄င်းက ထပ်လောင်း ပြောသည်။
ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခဲ့ သူများဖြစ်သည့် ကိုဝင်းခန့်၊ ကိုအောင်နိုင်ထွန်း၊ ကိုမျိုးမင်းစိုးနှင့် ကိုသူရထွန်း တို့မှာ စမ်းချောင်း ရဲစခန်းနှင့် တိုင်းရုံးသို့ ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထား ခဲ့ရာတွင် ပယ်ချခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် မစ္စတာ ကင်တားနား ရောက်ရှိချိန်တွင် ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် လိုသည့် အတွက် ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြောင်း၊ တရား စွဲဆိုမှုကို သြဂုတ် ၁၆ ရက်နေ့ ယနေ့တွင် ပြုလုပ် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ myanmarpyitharblog.blogspot.ca/
ရိုဟင်ဂျာ အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည် များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) ရှေ့တွင် ဆန္ဒ ဖော်ထုတ် ခဲ့သူများ အနက် ၄ဦးကို စမ်းချောင်းမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းက ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် တရားစွဲထားပြီး သြဂုတ်လ ၁၆ရက်နေ့တွင် တရားလို သက်သေကို စတင် စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း တရားစွဲဆို ခံထားရသူ တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးဝင်းခန့်က ပြေ
ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့် ငြိ်မ်းချမ်းစွာ စီတန်း လှည့်လည်ခွင့် ဥပဒေအရ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေး လိုသူများသည် အနည်းဆုံး ငါးရက် ကြိုတင် လျှောက်ထားရမည်ဆိုသော်လည်း လေးရက်သာ ကြိုတင် လျှောက်ထားခဲ့သဖြင့် ခွင့်မပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း UNHCR ရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်မှု ဖြစ်ပွါးသော နေ့တွင် စမ်းချောင်းမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးက ရှင်းပြသည်။
၁။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီနှင့်ထိုက်တန်သော သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသေးသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး သတင်းမီဒီယာသမားများက တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ တရားဝင်ဆန္ဒခွင့်
လျှောက်ထားမည်ဖြစ်သည်။ ဆန္ဒပြမည့်နေရာမှာ မြို့တော်ခန်းမအနီးဖြစ်ပြီး ဆန္ဒပြခွင့်ကို သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးသို့ တရားဝင် လျှောက်ထားမည်
၂။ သြဂုတ် ၂၂ ရက်နေ့တွင် Press Freedom အမှတ်တံဆိပ်ပါ အမည်းရောင်ဦးထုပ်များကို သတင်းမီဒီယာသမားများထံ ဖြန့်ဝေမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းအမည်းရောင် ဦးထုတ်များကို ၀တ်ဆင်ခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်
ဒီမိုကရေစီနှင့် ထိုက်တန်သော သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် မရသေးသည်ကို ဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။
၃။သြဂုတ် ၂၃ ရက်နေ့ ဒဂုံမြို့နယ် တရားရုံးတွင် The Voice Weekly ရင်ဆိုင်နေရသော အမှုအတွက် စွဲချက် တင်သင့် ၊
\_ မတင်သင့် တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်မည်ကို Press Freedom တံဆိပ်ပါ အမည်းရောင် ဦးထုပ်
နှင့် အမည်းရောင် အင်္ကျီများ ၀တ်ဆင်သွားရောက် သတင်းယူကြမည်ဖြစ်သည်။
၄။သြဂုတ် ၂၄ ရက်နေ့ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တရားရုံးတွင် တရားရင်ဆိုင်နေရသော လျှပ်တပြက် ဂျာနယ်အမှုကို Press Freedom တံဆိပ်ပါ ဦးထုပ် နှင့် အမည်းရောင် အင်္ကျီများ ၀တ်ဆင်သွားရောက်သတင်း
၅။သြဂုတ် ၂၄ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီအချိန်၌ တော်ဝင်နှင်းဆီတွင် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် မရရှိသေးသည့် ကိစ္စ ၊ ဆင်ဆာ မဖျက်သိမ်းသည့် ကိစ္စ ၊ မီဒီယာ ဥပဒေကို မီဒီသမားများအား အသိမပေးဘဲ ရေးဆွဲ
နေမှုအပါအ၀င် သတင်းမီဒီယာထိန်းချုပ်နေမှုများကို ဖယ်ရှားပေးရန် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်သော အထူးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
ဆန္ဒပြပွဲတွင် ပါဝင်ဆင်နွဲမည့် သတင်းသမားများ ကိုသာလွန်ဇောင်းထက် (၀၉၇၃၀ ၇၇၅၅၇) ထံ စာရင်းပးသွင်းနိုင်ပြီဟု သိရသည်။
ဘာသာရေး ပဋိပက်ခ ဖြစ်အောင် မလှုံ့ ဆော်ဖို့ တိဘက် သတိပေး
16 သြဂုတ်လ 2012 - 16:18 GMT BBC
တိဘက် ဘုန်းတော်ကြီး ပုံတွေကို အလွဲသုံးစား လုပ်ပြီး ဗုဒ်ဓဘာသာနဲ့ မွတ်စလင် တွေကြား ပဋိပခတွေ ဖြစ်ပေါ်အောင် လှုံ့ဆော် နေတာ တွေကို စိုးရိမ်ေ ကြာင်း အိန်ဒိယ အခြေစိုက် တိဘက် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ကေ ပြာ ပါတယ်။
အိန်ဒိယ နိုင်ငံမှာ အခြေစိုက် တဲ့ ပြည်ပရောက် တိဘက် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ CTA က သြဂုတ်လ ၁၅ရက်နေ့က ကြေညာချက် ထုတ် ပြန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလောင်းတွေ ဘေးမှာ တိဘက် ဘုန်းတော်ကြီး တွေရပ် နေတဲ့ ပုံတွေကို တချို့ လူမှု ကွန်ယက်တွေ မီဒီယာတွေ ပေါ်မှာ ဖော်ပြ တာဟာ ဗုဒ်ဓဘာသာနဲ့ မွတ်စလင် တို့ကြား အမုန်း ပွားအောင် လုပ်ကြံ ရန်တိုက် ပေးနေ တာ ဖြစ်တယ်၊ တကယ်တန်း ဒီပုံတွေဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဧပြီလ တုန်းက တိဘက် ဒေသ ငလျင် ကြီးမှာ သေဆုံး ခဲ့ကြသူ တွေကို တိဘက် ဘုန်းတော်ကြီး တွေက ကူညီ မြှုပ်နှံ နေတဲ့ပုံတွေ ဖြစ်တယ် လို့ေ ကြညာချက်မှာ ပါရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဗုဒ်ဓ ဘာသာနဲ့ မွတ်စလင်ကြား ရန်မီးပွားအောင် လှုံ့ဆော် ဖန်တီးနေတာ အားလုံး ရပ်ဆိုင်း ကြဖို့ အိန်ဒိယနိုင်ငံက တိဘက် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ပြန်ကြားရေး အရာရှိ တက်ရှီက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
အင်တာနက်မှာ တိဘက် ဘုန်းတော်ကြီ တွေရဲ့ ဓါတ်ပုံ တွကေို အလွဲသုံးစား လုပ်နေတာဟာ သိရ သလောက် ပါကစ်စတန်မှာ အသုံးပြု နေတာ ဖြစ်ပြီး ဗုဒ်ဓ ဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေက မွတ်ဆလင် တွေကို သတ်ဖြတ် နေတယ်လို့ လုပ်ကြံ စွပ်စွဲတာ တွေကို အမြန်ဆုံး ရပ်ပေးဖို့ တောင်းဆို ရာမှာ တချို့ ဝက်ဆိုဒ်က ဖယ်ရှားခဲ့ ပေမဲ့ အခု အထိ တချို့ ဆိုဒ် သုံးလေးခုမှာ ရှိနေသေး တယ်လို့ သူကေ ပြာပါတယ်။
ဒီလို မဟုတ် မမှန် ဖော်ပြ တာတွေကြောင့် ဘာသာရေး မုန်းတီးမှုတွေဖြစ်ပွား လာစေနိုင်တယ်လို့ လည်း ပြည်ပရောက် တိဘက် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့က သတိပေးထားပါတယ်။
တိဘက်ဒေသ ငလျင် ဓာတ်ပုံများနှင့် တိဘက်ဘုန်းတော်ကြီးများ ပုံကို နိုင်ငံတကာ မီဒီယာ အချို့ တလွဲ အသုံးပြုမှု CTA သတိပေး ။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လတ်တလော ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခများကို နိုင်ငံတကာ သတင်းမီဒီယာများနှင့် အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် သတင်းဓာတ်ပုံများ ဖော်ပြရာ၌ တိဘက်ဒေသတွင် လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် မြေငလျင်နှင့် ပတ်သက်သည့် ဓာတ်ပုံများကို လွဲမှားစွာ အသုံးပြုမှုများ ရှိနေခြင်းကြောင့် မလိုလားအပ်သည့် အရေးကိစ္စများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ကို စိုးရိမ်မိသည်ဟု တိဘက်ဒေသ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ဗဟို(Central Tebetan Administration-CTA) က သတိပေး ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း The Tiebet Post သတင်းစာက ရေးသားဖော်ပြသည်။
နိုင်ငံတကာနှင့် အခြား ပြည်တွင်းမီဒီယာတို့က မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဇွန်လအတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ပဋိပက္ခများအကြောင်း ရေးသား တင်ဆက်ကြရာတွင် တိဘက်ပြည်၌ ပြင်းထန်စွာလှုပ်ခတ်ခဲ့သည့် မြေငလျင် သတင်း ဓာတ်ပုံများကို လွဲမှားစွာ အသုံးပြုထားသည် ကိုတွေ့ရကြောင်း၊ မြေငလျင် လှုပ်ခတ်ခဲ့သော Kyigudho ပြည်နယ်တစ်ဝိုက် အပျက်အစီးများနှင့် သေဆုံးသူ ရုပ်အလောင်းများအကြား ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ပေးနေကြသည့် တိဘက် ဘုန်းတော်ကြီးများ ၏ ဓာတ်ပုံများကို အသုံးပြုထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ အဖွဲ့၏ သတိပေး ကြေညာချက်တွင် ပါရှိသည်။
'ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း လတ်တလော ဖြစ်ပေါ်နေသော ပဋိပက္ခ အပေါ် မီဒီယာအချို့က သတင်းရေးသား တင်ဆက်ရာ၌ တိဘက်ဒေသမှ ဘုန်းတော်ကြီးများ မြေငလျင် လှုပ်ခတ်မှုတွင် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေကြသည့် ဓာတ်ပုံများကို ထည့်သွင်း ဖော်ပြထား သည်ကို တွေ့ရှိရသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ တိဘက် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဗဟိုအနေဖြင့် များစွာ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရသလို အလွန်အမင်းလည်း စိုးရိမ် ပူပန် မိသည်' ဟု အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ Dharamshala မြို့အခြေစိုက် CTA အဖွဲ့၏ ကြေညာချက်က ဆိုသည်။
'ငလျင်ကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသူများ၏ ရုပ်အလောင်းများ အကြား မတ်တပ် ရပ်နေသည့် တိဘက် ဘုန်းတော်ကြီးများ၏ ဓာတ်ပုံများမှာ ရခိုင်ကိစ္စ ရေးသား ဖော်ပြကြသည့် မွတ်စလင် နိုင်ငံများ၊ အထူးသဖြင့် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံမှ သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက် များတွင် ဖော်ပြ ပါရှိလာသည် ကိုတွေ့ရသည်' ဟု ယင်းအဖွဲ့က ဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဇွန်လအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခများကြောင့် လူပေါင်း ၈၀ကျော် သေဆုံးခဲ့ကာ ဒုက္ခသည် ခြောက်သောင်းကျော် ရှိကြောင်း၊ဈေးများ၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊ ဗလီများလည်း ပျက်စီး ဆုံးရှုံး ခဲ့ကြောင်း တရားဝင် ထုတ်ပြန် ချက်များအရ သိရသည်။
ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများကို လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဆိုတာ လုံးဝမဟုတ်ကြောင်း ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ဘလော့ဂါ Faraz Ahmed ကပြော
“အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာကို စွတ်စွဲ ရှုံးချတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေက လုပ်ကြံဖန်တီးထားပါတယ်၊ လုံးဝကို လိင်လည်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။”
သိပ်ရယ်စရာကောင်းတာတော့ တူရကီ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး နှင့် အကျဉ်းထောင်ကျနေတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် ပြောတာနဲ့တော့ လုံးဝတခြားစီဖြစ်နေတာပါပဲ။ စာနာထောက်ထားတက်ပြီး ပညာတတ် မွတ်ဆလင်တွေကတော့ သူတို့လို မြန်မာကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ပညာမဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မျိုးကို ဘယ်တော့မှ ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။ တူရကီ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာပြည်မရောက်ခင်မှာ မြန်မာမှာ မွတ်ဆလင်တွေကို လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုရှိတယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်၊ ဒါဟာ လုံးဝကို မှားပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားမှာ အကျဉ်းထောင်ကျနေတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်က လေထဲကနေ မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို ခြိမ်းခြောက်လိုက်ပါတယ်၊ ဒါဟာ အလွန့်လွန် မိုက်မဲပြီး အကြောင်းအကျိုး မဆင်ခြင်တတ်တဲ့ လုပ်ရက်ပါပဲ။
ပါကစ္စတန်ဘလော့ဂါက ဆက်ပြောပါတယ် အဲဒီ အကျဉ်းကျနေတဲ့သူရဲ့ ခြိမ်းခြောက်တဲ့ စကားကိုလဲ လုံးဝမယုံကြည်ပါဘူးတဲ့။ သူတို့တတွေဟာ လိမ်လည်ပြီး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ပုံပြင်တွေတွေကို များစွာ ဖန်တီးနေကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ အလွန်ထိလွယ် ရှလွယ်တဲ့ အာဏာရှင်များ အုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံမှာ အနောက်ဘက် နယ်စပ်ကနေ တရားမ၀င် ကျုးကျော်ဖြတ်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေအတွက် ဘာများထိခိုက်စေခဲ့လဲ?
ဥပဒေမဲ့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ ထိမ်းသိမ်းရတာ ခက်ခဲပါတယ်၊ သူတို့ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံကလဲ အလိုမရှိပါဘူး၊ ကျွန်ုပ်ဆိုလိုတာက တခြားနိုင်ငံမှ အလွန်များပြားတဲ့ မဆင်ခြင် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာ ပြဿနာများစွာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ နိုင်ငံအတွက် ကြီးစွာသော ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှိကလဲ သူတို့ (ဘင်္ဂါလီ)တွေ ပြန်လာမှာကို မလိုလားပါဘူး။ မြန်မာရဲ့ နောက်တစ်ခု ပြဿနာက စစ်တပ်အောက်မှာ အနှစ် ၅၀ ချွတ်ခြုံကျခဲ့ရပြီး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ ရုန်းကန်နေရခြင်းပင် ဖြစ်နေတယ်။ ဒီလိုမျက်ကန်းကလေးသဖွယ် စမ်းတ၀ါးဝါးနဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ရုန်းကန်နေဆဲမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ ၈သိန်းသော ဘင်္ဂါလီတွေကို အားလုံး ပြင်ဆင်ပေးဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဥပဒေအရ ပြောရမယ်ဆိုရင် တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ နိုင်ငံအတွင်းမှာ နေထိုင်သူ မည်သူမဆို တရားမ၀င် ကျုးကျော်ဝင်ရောက်လာသူဟု ဆိုပါသည်။ ဘာ့ကြောင့် မြန်မာပြည်သူတွေက အဲဒီလိုလူတွေအားလုံးကို လက်ခံရမှာလဲ? အကယ်၍ မြန်မာပြည်က အဲဒီလူအားလုံး လက်ခံလိုက်ရင် ဘင်္ဂလားဒေးရ်ှကတော့ အပူလုံးကြီး ငြိမ်းသွားမှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာက နိုင်ငံရေးရော စီးပွားရေးပါ ဘေးရန် နှစ်ခုလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးပေါ်မှာ ကျရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ လပိုင်းက ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရခိုင်လူမျိုးတွေအပေါ် အကြမ်းဖတ်မှုတွေ တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မြန်မာ့လူထုက အနောက်ဖတ် မလုံခြုံတဲ့ခြံစည်းရိုးကနေ ၀င်ရောက်လာမှုအပေါ် ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ လုံးဝရပ်ဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။
Not At All Genocide on Bengalis in Rakhine State--Their Lies will Fade away. By YEMINTUN | Posted August 14, 2012 | Michigan Faraz Ahmed, the writer and blogger, is from Pakistan and he said truth. He said the photos on the social network were very fabricated. We all know that there isalot of fake news about the Bengali crisis in Burma.
လူဆိုတာ ခံစားချက်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရင် ရူးကြောင်မူးကြောင်တွေဘဲ လုပ်ဖြစ်ပါလိမ့် မယ်။ ခံယူချက်နဲ့ အလုပ်စေချင်ပါတယ်။ခံယူချက်ကတော့ ကောင်းပါရဲ့ အရည်အချင်းမရှိရင် နောက်လိုက်သက်သက်ဘဲဖြစ်ဦးမှာဘဲ။ အေး ခံယူချက်ပြည့် ဝပီး အရည်အချင်းရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း တယောက်ဖြစ်ချင်ရင် ကိုယ်ပြောချင် လုပ်ချင်တာတွေကို အရင်ပြန်ဝေဖန်ရတယ်။ ငါဒီလို ပြောလိုက်ရင် အကျိုးဆက်က ဘာတွေဖြစ်လာနှိုင်မလဲ။ ကောင်းကျိုးဖြစ်မလား ဆိုးကျိုးများမလား ဆိုတာမျိုး။ အခုမင်းဝေဘန်ထားတာကြီးက သူတပါးရဲ့ အကြောင်း ပီးတော့အကောင်းရယ်လို့ မဟုတ်ဘဲ အပစ်တင်ထားတာမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။ မင်းပြောချင် လိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာကို ဒေါ်စုက နှုတ်ဆိတ်နေလို့မင်းတို့ တွေ မခံချိမခံသာ ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာလဲ ငါသဘောပေါက်ပါတယ်။ မင်းတို့ က ဒေါ်စုကို ရိုဟင်ဂျာ အရေးအခင်းထဲမှာ ၀င်ပါစေချင် တခုခုဝင်ပြောစေချင်နေတယ်မဟုတ်လား။ မောင်ဇာနည် ရာ မင်း လူရည်မလည်သေး ပါလားကွာ။ ဒေါ်စု နိုင်ငံရေးပါးမ၀ရင် ပြည်သူ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပါ့ မလားဟ ငတုံးရ။ မင်းတို့ ငါတို့ လို အာဝါဒါး တွေကသာ မိုးပြောဂျိုးပြောနဲ့ပြောလို့ ရကြပေမဲ့ဒေါ်စုရဲ့စကားတခွန်းဟာ ဘယ်လောက်အထိ ကမ္ဘာကို တုန်လှုပ်သွားစေနှိုင်တယ်ဆိုတာ မင်းလဲသိနေတာဘဲကွာ။ ဒေါ်စုကို ရိုဟင်ဂျာကိစ္စ အင်္ဂလန်မှာတုံးကလဲမေးခဲ့ တယ်။ မသိလို့ မသိဘူးလို့ ပြောခဲ့ တယ် ရိုးရိုးလေးဘဲ။ တတ်ရောင်ကားနဲ့ဒါကဒီလိုရှိပါတယ် ဘာညာ ရှောက်ပြောမသွားဘူး။ ပြောရင်လည်း မင်းတို့ အကွက်ထဲ ၀င်သွားမယ်ဆိုတာ ဒေါ်စုမပြောနဲ့မောင်ရင်လဲသိသလို့ ငါလဲသိနေတယ်လေ။ ဟဟ မင်းမအံ့ သြပါနဲ့ မောင်ဇာနည်ရ၊ ဒါတွေက မင်းတို့ ရဲ့ အကွက်ဆင်ထားတဲ့ အရာတွေလေ။ မင်းတို့ ပြောစေချင် ကြာဝင်ညပ်စေချင်နေတာကြီးကို ဒေါ်စုက အနှစ် ၂၀ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ အတွင်းအားကျင့် စဉ် ကိုယ်ဖေါ့ သိုင်းကွက်နဲ့လှလှပပလေး ကျော်လွှားသွားလိုက်တော့မင်းတို့ တွေပက်လက်ကလေးလန်ပီး ကျန်ခဲ့ ကြရောမဟုတ်လား။ မင်းကပြောသေးတယ် ဒေါ်စုက မျက်စေ့ ထဲမှာဆုတွေလဘ်တွေမျှော်ကိုးသလိုမျိုး ၂၀၁၅ ဗုဒ္ဓဘာသာဆန္ဒမဲတွေကို ရယူဘို့ ဘဲအာသာငန်းငန်းထ နေပါတယ်တဲ့ ။ ငါမင်းကိုတခုလောက်မေးချင်လို့ ကွာ မောင်ဇာနည်ရာ မင်းကို အလုပ်ခန့် ထားတဲ့ လဒ တွေက မြန်မာအရေးကျွှမ်းကျင်သူဆိုပီး Myanmar expert and visiting fellow at the London School of Economics အလုပ်ပေးလုပ်ထားတာ ငါတော့ အံ့ သြမဆုံးနှိုင်ဘူးကွာ။ မင်းဘယ်လိုကြောင့် များအဲဒီမှာ အလုပ်ရတာလဲ၊ မင်းထက်စာရင် ဗမာပြည်က ငါးစိမ်းသည်တောင် မင်းထက်နိုင်ငံရေးပါဝတယ်။ မင်းမသိသေးတာလေးငါပြောပြမယ် နားထောင်... သူတော်စင် သူတော်မြတ်တွေကို အရက်သမားတစုက သူတို့ နဲ့ အရက်အတူတူလာသောက်ပါလို့ဖိတ်မန္တက ပြုတာကို သူတော်စင်ကငြင်းတော့ဒီလောက်ပြူငှာစွာဧည့် ဝတ်ပြုတာကို လက်မခံဘူး ဆိုတာတော်တော်ကြီးကို ရိုင်းပြပါတယ်ဆိုပီး လူတကာကို ပြောတယ်၊ မင်းစဉ်းစားကြည့်သူတော်စင်နဲ့အရက်သေစာ အပ်စပ်သလားဆိုတာကို။ အေး ဒေါ်စုကလည်း မင်းတို့ ဆင်နေတဲ့ အကွက်မှန်းသိလို့ ရှောင်သွားတာ။ ကမ္ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်က လူမျိုးရေးဘာသာကွဲပတိပက္ခကို ဘယ်ကြားဝင်လိမ့် မလဲ ငတုံးရာ။ သူကနိုင်ငံတော် အစိုးရမှ မဟုတ်တာ သူ့ မှာကော ဘာတာဝန်ယူစရာရှိလို့ လဲ။ အေး ၂၀၁၅ မင်းပြောတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဲ(ဟိဟိ) ဆန္ဒတွေနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရ အကြီးအကဲ ဖြစ်လာပီဆို၇င်တော့မင်းတို့ သိပ်ပြောစေချင် သိပ်လုပ်စေချင်နေတဲ့ဒီကိစ္စကြီးကို သူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလိမ့် မယ်။ အဲဒီကျရင် မင်းတို့ က ပြောဦးမှာ...ဟာငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဖြစ်ပီး လူမျိုးကွဲ ဘာသာခြား ကိစ္စကို ကိုင်တွယ်တာ မျှတမှုမရှိဘူးလို့အော်ဦးမှာ။ အဲဒီကျတော့ဒေါ်စုက (ထားပါတော့ ) နိုင်ငံရဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ အကြီးအကဲဖြစ်နေတဲ့ အတွက် သူ့ နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားကိုသာ ဦးစားပေးပီးဆောင်ရွက်လိမ့် မယ်။ မကျေနပ်လို့နိုဘယ်ဆုကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်တောင် လွတ်လပ်ရေးကို ရအောင်ဆောင်ကျဉ်းပေးခဲ့ တဲ့ဖအေတူသမီးဘဲကွာ အသက်ကိုတောင် စွန့် ထားတာ မင်းတို့ နိုဘယ်ဆုက အသက်လောက်ဘဲ တန်ဘိုးရှိလို့ လား။ ရှင်းရဲ့ လားမောင်ဇာနည် သဘောပါသလားဟေ့ ..
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/16/20123အကြံပြုခြင်း
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/16/20122အကြံပြုခြင်း
ဇေကမ္ဘာ က ဦးနေမျိုးဝေကို တရားစွဲပြီ ။ ပုဒ်မ (၅၀၀) အသရေဖျက်မှု ။
၂၃-၈-၂၀၁၂ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တရားရုံး နံနက် ၁၀ နာရီ ရုံးချိန်း လယ်သမား ၁၀၀ လာကြည့် သက်သေခံမည် ။ မည်သူမဆို လာရောက် အားပေးနိုင်ပါသည်။ ကျနော့်အား လာရောက်အားပေးသူကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည် ။ ရှေ့နေကွန်ယက်မှ ဦးအောင်သိန်း ၊ ဦးသိန်းသန်းဦး တို့ အဖွဲ့လိုက် အခမဲ့ရှေ့နေလိုက်ပေးမည်ဟု ဦးသိန်းသန်းဦးမှ ပြောပါသည်
နေမျိုးဝေ ဖြန့်ဝေသည် ။ လိုင်းမကောင်းသဖြင့် တရားရု့းမှဆင့်ခေါ်စာ စာရွက်ဓါတ်ပုံ
မတင်နိုင်ပါ ။ ဆက်သွယ်ရန် 098610719